Balanbaalis Balanbaalis, Bambooyin Centrifugal, Qabashada Filter Rux - Convista
CONVISTA waxay u heellan tahay baaritaanka iyo keenista dhammaan noocyada qalabka xakamaynta socodka
sida Valves, Valu actuation & Controls, Bambooyin iyo qeybaha kale ee la xiriira & qalabka sida Flanges & Fittings, Strainers & Filters, Joints, Flow meters, Skids, Casting & forging qalabka iwm.
CONVISTA waxay ku tiirsan tahay tikniyoolajiyadda xirfadeed iyo adeeg aad u wanaagsan si ay u bixiso badbaadin, tamar-badbaadin iyo xallinta xallinta qulqulka deegaanka u habboon. Xalkani wuxuu ku siin karaa Qalin, Valu actuation & Controls, Bambooyin loogu talagalay codsiyada ugu adag ee guud ahaan dhuumaha gudbinta saliida & gaaska, sifaynta & Petrochemical, kiimikada, kiimikada dhuxusha, awooda caadiga ah, macdanta & macdanta, kala saarida hawada, dhismaha, biyaha dhidka ah & Bulaacadaha Biyaha iyo Cuntada & daroogada iwm Adeegyada kaladuwan ee dhammaystiran ayaa ka wareegaya miisaaniyadan diirada saareysa macaamiisha.
Joogtaynta & Mas'uuliyadda
Hawlaha ganacsiga ee CONVISTA iyo mas'uuliyadda bulshada waxay diiradda saareysaa gaaritaanka waara, tamarta keydinta iyo bey'adda u habboon ayaa hubineysa faa'iidada muddada-dheer ee deegaanka iyo aadanaha.
Caafimaadka iyo badbaadada shaqada ee shaqaalaha
Si loo hubiyo nabadgelyada ugu badan ee goobta shaqada, CONVISTA waxay qeexday tilmaamaheeda u gaarka ah ee EHS (Caafimaadka iyo Ammaanka Deegaanka) iyadoo sidoo kale la kulmeysa heerarka qaranka iyo kuwa caalamiga ah.
Steel Trunnion Been abuurtay Mounted Si buuxda u welded Ball ...
Xilliga Guga nooca ceelka badbaadada oo buuxa (W taxanaha)
3243 NRS Qalabka Fadhiga Adkaysiga leh
2105 EN 593 Balanbaalis Balanbaalis Double
2108 AWWA C504 C516 Balanbaalis Double Eccentric ...
2502 Balanbaalis Balanbaalis Madax
1319 Qalabka Cadaadiska Cadaadiska Cadaadiska Birta
Waxaan bixinnaa xalal cusub oo loogu talagalay horumarka waara. Kooxdayada xirfadeed waxay ka shaqeeyaan sidii loo kordhin lahaa wax soo saarka iyo qiimaha wax ku oolka suuqa